रिलिजको मुखमा किन स्कटल्याण्ड उड्यो ‘कृ’ टिम ? « Ramailo छ
रिलिजको मुखमा किन स्कटल्याण्ड उड्यो ‘कृ’ टिम ?
प्रकाशित मिति : Jan 27, 2018
समय : 8:56 am
प्रदर्शन मिति नजिकिंदै गर्दा ‘कृ’ टिम विदेश उडेको छ । फिल्मको बाँकी एउटा गीत खिच्न दश जनाको टिम शुक्रबार राती स्कटल्याण्ड उडेको हो । एक सातामा ‘कृ’ टिम नेपाल फर्किनछ । फिल्म यही माघ २६ देखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
युवा स्टार अनमोल केसी, नायिका अदीति बुढाथोकी, निर्माता भुवन केसी, निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल, निर्माता सुवास गिरी, सिनेम्याटोग्राफर पुरुषोत्तम प्रधान र प्रोडक्सन हेड शंकर पाण्डे स्टल्याण्ड जाने टिममा समावेश छन् । यस्तै भुवन प्रेमिका जिया केसी पनि उक्त टिममा समावेश छिन् । तर इयरपोर्टमा भने जिया मिडियासँग तर्किइन् । अनमोल, अदीति र भुवनले स्कटल्याण्ड उड्नु अघि यसो भने । भिडियो हेर्नुस् :